Maurizio Sarri oo diiday dalab ka yimid kooxda Arsenal – Gool FM
Maurizio Sarri oo diiday dalab ka yimid kooxda Arsenal
Dajiye December 28, 2019
(Turin) 28 Dis 2019. Kooxda Juventus ayaa diiday inuu u ogolaado mid ka mid ah xiddigahiisa inuu ugu biiro kooxda Arsenal qaab amaah ah ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “’The Sun” ee dalka Ingiriiska, kooxda Juventus ayaa diiday inay amaah ku bixiso xiddiga qadka dhexe reer France ee Adrien Rabiot bisha Janaayo ee nagu soo aadan.
Go’aankan ay qaadatay kooxda lagu naaneyso marwada duqda ah ayaa waxaa sabab u ah macalin Maurizio Sarri, si Adrien Rabiot uu u sii joogo Juventus.
Arsenal ayaa dooneysa inay la soo saxiixato xiddig khadka dhexe ah, sababtoo ah si ay kaga dhigato badelka Granit Xhaka oo ay suurtogal tahay inuu ka dhaqaaqo waqooyiga magaalada London, marka uu furmo suuqa ciyaartoyda bisha Janaayo ee soo aadan.
Waxaa xusid mudan in Adrien Rabiot uu ku soo biiray safka kooxda Juventus horaantii xilli ciyaareedkan, isaga oo ku yimid beeca xurta ah, kaddib markii uu dhacay qandaraaskii uu kula jiray kooxda Paris Saint-Germain.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Burnley Iyo Manchester United ee Premier League oo la shaaciyey
Man United oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Burnley oo ay booqatay…+SAWIRRO